ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စမ်းချောင်း NLD ရုံးခွဲကို ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေး ~ ဆုံနေကြ
Wednesday, May 02, 2012 လပြည့်ဝန်း No comments
မေလ ၁ ရက်နေ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ် NLD ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နာယက ဦးတင်ဦးတို့ဟာ မေလ ၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်း စမ်းချောင်းမြို့နယ်က အန်အယ်ဒီ ရုံးခွဲကိုသွားရောက် ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖွင့်လှစ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံတွေနဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း မြို့ ရွာ န...
စက်ရုံလုံခြုံရေးနဲ့ ဆန္ဒပြသူ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်
ပဲခူးမြို့ မဇင်းရပ်ကွက် NLD ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲအခမ်းအ...
ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ၂၇ နိုင်ငံကို ပေးပြီ
စက်ရုံတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများ သန့်စင်ခန်းသွားပါက အခကြေ...
အသက် ၆၀ အရွယ် အမျိုးသမီးကို တပ်သားက အဓမ္မပြုရန်ကြို...
NLD ကျမ်းကျိန်ဖို့ ငြင်းတုန်းက မှားတယ်လို့ပြေားတဲ့...
"တော်ဝင်မြန်မာ ဇာထိုးပန်းထိုး စက်ရုံ အလုပ်သမား အချ...
"လုပ်ခလစာ တိုးမြှင့်ပေးရန် တောင်းဆိုသော အလုပ်သမမျာ...
လမ်းမတော်မြို့နယ် (၇) လမ်း၊ တိုက် အမှတ် (၇၆ A)၊ ၃ ...
Demonstration to Revolution
မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၆၅x၆၆ လမ်း၊ မနော...
စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံဥပဒေ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှု...
ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်၌ ဒေ...
တစ်နှစ်ပြည့် ကချင်စစ်ပွဲနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်...
အဆိုတော် မျိုးကျော့မြိုင် အိမ်ကူ လုပ်သားအား နှိပ်စ...
ဒေါ်စု ထိုင်းခရီးစဉ် စီမံခန့် ခွဲ မှု လို ဟု နယူ...
"ကျောင်းပြန်တက်ခွင့် မရသည့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကျောင်း...
အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး အကြံပေးကောင်စီတွင...
နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ ဟိုတယ်အခန်းရရှိရန် ခက်ခဲခြင...
The Nation သတင်းစာဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ ဒေါ်အောင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဟာချိုင်ကို ရောက်ရှိလာ
ဖယောင်းတိုင်မီး သံလျင်ကို ကူးပြီ
အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေသော သံရည်ကျို စက်ရုံလုပ်သားများကို...
မြန်မာ့လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်အတွက် ဂျပန်က ၁၂၀ မဂ္ဂါဝပ် ...
မေ ၃၀ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူး) ညတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်...
Photo by Myo Min Twin ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေရဲ.အခြေအနေပ...
ညစဉ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေထဲက လူငယ်ခေါင်းဆောင် ၁၁ ဦးကို...
ရေဓာတ်ငွေ့ကားကို ဆိုလာပြားဖြင့် မောင်းနှင်မည့် သုေ...
ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ် ရက်ရွေ့ဆိုင်း...
တတိယအကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ ဂုဏ်ရည်ဆုနဲ့ဂုဏ်ထူးရှင်...
မေလ ၂၈ ရက် ည ၇ နာရီခန့်တွင် မိုးထဲရေထဲမှာ ဖယောင်းတ...
လျှပ်စစ် (၁) ကအခုလိုပွင့်လင်းတာကို ကြိုဆိုပါတယ်..
ကိုဇာဂနာ ဗြိတိန်နိုင်ငံကို မကြာခင် သွားမည်.....
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အကြံပေး ကောင်စီ ဖွဲ့စည်းရန်ပြင်ဆင...
စက်ရုံ ၂ ရုံက အလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုချက်ရပြီ...
ချောင်းဆုံရဲ၏ရိုက်နှက် စစ်ဆေးမှုကြောင့် လူငယ်တစ်ဦး...
ရွေညဝါ ဆရာတော် အလုပ်သမားတွေကို ဆက်လက်ကူညီ...
လှိုင်မြစ်ကမ်းပြိုကျ၍ အဏ္ဏ၀ါလွမ်းအအေးခန်း စက်၇ုံ အဆေ...
ကျောက်စိမ်း တူးဖော်ခြင်း ယာယီ ရပ်နားရန် ညွှန်ကြား.....
ပုသိမ်မြို့ HIV/AIDS ဖြေဖျော်ပွဲတွင်လည်း ဖယောင်းတိ...
﻿ ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တွင် လျှပ်စစ်မီး...
ဂျပန်နိုင်ငံက သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများက ပြည်သူကို...
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က...
ဗိုလ်သန်းရွှေစာရေးဆရာ လေဆိပ်က လှည့်ပြန်ရ ......
တစ်ညလုံး စက်ရုံကိုပိတ် ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
မြန်မာပြည်တွင်း နိုင်ငံအနှံမှာရှိတဲ့ စီမံကိန်း သတင...
လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်အားလုံး အားလုံးသို့ြ...
သူ့ဘော်လီဘောပုတ်..။ ကိုယ့်ဘော်လီဘောပုတ်နဲ့...။ မှိ...
စတုတ္ထမြောက် ရန်ကုန်ရဲ့ ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး...
ငြိမ်းချမ်းရေး ၆၇ အခမ်းအနားမှ ကိုမင်းကိုနိုင် ကိုေ...
ရန်ကုန်သရဖူ သံမဏိစက်ရုံ အလုပ်သမားများ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒ...
ရေး နဲ့ ကော့သောင်းမှာ ငါးဖမ်းခွင့်
ဤကဗျာကို ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် ကျွန်ုပ်ရေးသည်.....
စစ်ကုန်သည်ကြီးများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း ( ၁ )
ငါတို့လည်း .... အလှည့်ကျပေါ့ကွာ ..
ရှမ်းလမ်းဈေးမီး နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေ
ဦးမြင့်၏ ‘အိတ်ဖွင့်ပေးစာ’ သမ္မတရုံး သဘောထားမဟုတ်ဟု...
NLD ပါတီ အလုပ်သမားများဘက်က ရပ်တည်မည်
ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်က အလုပ်သမား ဆန္ဒပြပွဲတွေ...